यसरी सुरू गर्न सकिन्छ ट्रकमा डुलाउन मिल्ने रेष्टुरेन्ट अर्थात् ‘फुड ट्रक’ व्यवसाय
Photo Source : My Republica-Nagarik Network
खाना बेच्ने ट्रकका बारेमा कहिल्यै सुन्नुभएको छ? विदेशतिर धेरै प्रचलित यो व्यवसाय पछिल्लो समयमा नेपालीहरू माझ पनि चर्चित हुन थालेको छ। नयाँ भएकाले यस व्यवसायले राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले यदि होटेल वा रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने फुड ट्रकका बारेमा पनि एक पटक अवश्य सोच्नुहोला।
के हो फुड ट्रक?
फुड ट्रक खाना बेच्ने भ्यान/बस/ट्रक हो। यो निश्चित ठाउँमा खोलिने होटेल तथा रेस्टुरेन्ट भन्दा अलिक फरक छ। यसमा खाना बस वा ट्रक भित्र पकाइन्छ। अझ रोचक विषय के हो भने यसको निश्चित ठाउँ नहुन सक्छ। आज काठमाडौँमा देखेको फुड ट्रक भोलि भक्तपुर पुग्न सक्छ। यसरी ठाउँ ठाउँमा घुमीघुमी खाना बेच्ने फुड ट्रकको व्यवसायलाई मोबाइल फुड ट्रक भनिन्छ। यसलाई एकै ठाउँबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
एकैठाउँमा राखेर बेच्ने कि मोबाइल सेवा दिने? यी मध्ये कस्तो किसिमको खोल्ने भनी पहिला नै निर्णय गर्नुहोस्।। कस्ता खाना बेच्ने भनेर एउटा मेनु तयार गर्नुहोस्। नेपालीहरूले धेरै रुचाउने म:म, चाउमिन, ससेज आदि बाट सुरु गर्न सकिन्छ। नयाँ स्वाद थपे पनि राम्रो हुन्छ। नेपालीहरू नयाँ खानाको स्वाद लिनको लागि लोभिन्छन्।
त्यसपछि लगानी जुटाउनुहोस्। भान्सा जडान भएर आएका फुड ट्रकहरू किन्न पाइन्छ। तर यस्ता ट्रकहरू महँगा हुन्छन्। यसको विकल्पमा तपाईँले पुराना बस अथवा भ्यानहरू किनेर आफैँ भान्सा जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई १५ देखि २० लाखसम्मको लगानीमा सुरु गर्न सकिन्छ।
मोबाइल फुड ट्रक हो भने ठाउँको चिन्ता हुँदैन तर एकै ठाउँमा राखेर गर्ने हो भने ठाउँ छान्दा निकै सतर्क हुनुपर्छ। उक्त ठाउँमा राख्न अनुमति लिनुपर्ने हो भने लिनुहोस्। खानाको व्यवसायका लागि मानिसको जमघट धेरै हुने ठाउँहरू उचित हुन्छन्। अझ अफिस, स्कुल तथा कलेजहरू नजिक खोलेमा राम्रो व्यापार हुनसक्छ। सफा र धुवाँ धुलो नभएको ठाउँलाई मात्र ग्राहकहरूले रुचाउँछन्। अलिकति फराकिलो ठाउँ छान्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ट्रकलाई सजाउन भुल्न हुँदैन। अनि आवश्यक सामाग्रीहरू जस्तै खाना पकाउन चाहिने ग्याँस, मेसिनहरू, फ्रिज र ग्राहकहरूका लागि टेबल, कुर्सी आदि जुटाउन सकिन्छ। ट्रकलाई सधैँ सफा राख्नुपर्छ।
व्यवसायको ब्रान्डिङ गर्नुभयो भने त्यसले व्यापारमा थप सघाउँछ। ब्रान्डिङका लागि सुरुमा कस्तो थिमको प्रयोग गर्ने भनी पक्का हुनुपर्छ। अरू फुड ट्रक व्यवसायीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र के बढी बेचिरहेका छन् भनेर हेर्न सकिन्छ। व्यवसायलाई थिम अनुरूप नै आकर्षक नाम र लोगो चाहिन्छ। नक्सालमा रहेको पाङ्ग्रा एक्सप्रेसले गाडीका पाङ्ग्राहरूबाट टेबल तथा कुर्सी निर्माण गरेर ट्रकलाई पनि सोही हिसाबले सजाएकाले त्यसलाई देख्दा सजिलै चिन्न र सम्झिन सकिन्छ। यस्ता ठाउँमा धेरै युवाहरू आउने भएकाले उनीहरूको रुचीलाई ध्यानमा राखेर थप योजनाहरू बनाउँदा अझ फाइदा बटुल्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि: ट्रक भएको ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा राख्न मिल्ने फोटो खिच्ने स्टेसन बनाइदिन सकिन्छ।
यस्तै धेरै युवाहरूले मनपराउने व्यवसाय भएकाले यसको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न पनि भुल्नुहुँदैन। खान आएका मानिसहरूसँग प्रतिक्रिया लिएको भिडियो पनि हाल्न सकिन्छ।
रेस्टुरेन्टको सट्टा फुड ट्रक खोल्दा कस्ता फाइदा हुन्छन्?
धेरैजसो रेस्टुरेन्टहरू खोल्दा भाडामा नै धेरै खर्च हुने गर्छ तर मोबाइल फुड ट्रक हो भने एक पटक ट्रक किन्न पैसा पर्ने हो, भाडा तिरिराख्नुपर्दैन।
फुड ट्रक नेपालमा धेरैका लागि नयाँ हुन्छ जसले गर्दा एक पटक नयाँ ठाउँमा खाइहेरूँ भनेर ग्राहकहरू आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
मोबाइल फुड ट्रकबाट तपाईँ थुप्रै ग्राहकसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको धेरै ग्राहकसम्म पहुँच बढाउँछ जसले ब्रान्डिङमा पनि मद्दत गर्छ।
रेस्टुरेन्ट सार्नुपर्ने भयो भने धेरै सामानहरू हुन्छन्। सार्न गाह्रो पर्नसक्छ। यसका तुलनामा फुड ट्रक सजिलै एक ठाउँबाट अर्कोमा सार्न सकिन्छ।
मेला, सर्कस तथा हाटबजारहरू लागेका बेला तुरुन्तै गएर खाना बेच्न सकिन्छ।
यी हुन् थोरै लगानीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने...
हातमा सीप र राम्रा योजनाहरू हुँदाहुँदै पनि...
यसरी गर्न सकिन्छ घरको छतमै तरकारी फलाउन सकिने...
तरकारीको भाउ दिनदिनै बढिरहेको छ। किसानबाट कम...
युट्युबमा सिकेर आधुनिक माछा पालन गरेका धरानका युवाको...
धरानका श्रवण लिम्बुको माछाफर्म हामीले देखिरहेका अरू...
यसरी गर्न सकिन्छ आधुनिक मासु पसल! (भिडियो सहित)
घर नजिकै हामीले थुप्रै मासु पसल देखिरहेका...